Fanakanan-dalana any amin’ny RN4 : Nahazo fahafahana ireo voalaza ho tompon’antoka -
AccueilSongandinaFanakanan-dalana any amin’ny RN4 : Nahazo fahafahana ireo voalaza ho tompon’antoka
Vantany vao vita ny fanadihadiana rehetra nataon’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia natolotra ny fampanoavana tao Maevatanàna avy hatrany ireo olona tompon’antoka tamin’ny fanafihana taksiborosy iray mampitohy an’iny lalam-pirenena fahaefatra iny. Rehefa nivoaka anefa ny didy, dia fantatra fa nahazo fahafahana avokoa ireo olona voalaza ho tompon’antoka tamin’izany. Manoloana ny zava-nisy, dia velon-taraina tanteraka ireo fianakaviamben’ny mpitatitra ao amin’ny zotra nasionaly taorian’io fanapahan-kevitry ny fampanoavana any an-toerana io. Izy ireo izay nilaza fa feno ny porofo hanenjehana ireo olona nahiana ho dahalo ireo , raha tsy hilaza afa-tsy ny fahatrarana ny satroka sy ny fitafian’ny iray tamin’ireo niharan-doza , tany amin’ny iray tamin’ireo olon-dratsy ireo. Raha ny fantatra ihany koa, dia nisy tomponandraikitra ambony ao ambadik’ireto olon-dratsy ireto ka izay no antony nahafahan’izy ireo madiodio tao anatin’io raharaha io. Raha tsihiavina, dia tapa-bolana lasa izay no nisehoan’ity fanafihana taksiborosy hizotra aty Antananarivo ity, tao amin’ny kaominin’I Beanana. Ankoatran’ny fandrobàna nataon’ireo andian-dahalo nirongo fitaovam-piadiana , dia naratra ihany koa ny mpamily sy ny sasany tamin’ireo mpandeha. Rehefa nahazo fitarainana mahakasika an’io trangam-panafihana sy fanankanan-dalana io ny zandary dia nanokatra ny fanadihadiana sy nikaroka ireo olon-dratsy izay tao tompon’antoka tamin ‘izany.
Vetivety ihany dia nahitam-bokany ny famotorana satria ny ampitso nisehoan’ny asa ratsy, dia nisy lehilahy iray voasambotr’ireo mpitandro ny filaminana. Tamin’ny alalan’ny fahatrarana sy ny fakana am-bavany natao an’ity farany indray avy eo no nahafahana nisambotra ireo namany taorian’izay. Raha tsiahivina, dia efa nisy tranga tahaka ity niseho tany amin’ny lalam-pirenena faha-efatra ity ihany koa tany amin’iny lalam-pirenena faharoa iny volana vitsy lasa izay ary niteraka ny fitokonan’ireo fiara taksiborosy mampitohy iny lalana iny mihitsy izany. Noafahan’ny teo anivon’ny fampanoavana ihany koa mantsy ireo olona rehetra voalaza fa ati-doha sy nandray anjara mivantana tamin’ny fitorahana sy fanafihana ireo taksiborosy rehetra mandalo eo Brickaville ka tsy nahafaly ireo mpamily izany. Nody ventiny ny rano nantsakain’izy ireo satria dia niafara tamin’ny fampidirana am-ponja ireo olon-dratsy ireo ihany izany fitakiana natao izany. Ankoatran’izay voalaza moa, dia mbola nohamafisin’ireo mpamily ihany koa ny fangatahan’izy ireo, ny amin’ny hanalana ireo “casseur de vitesse” any amin’iny rn4 iny. Raha hiadiana amin’ny resaka lozam-pifamoivoizana mantsy no nametrahan’ny fitondram-panjakana izany, dia lasa niteraka tsy fahandriam-pahalemana goavana ho an’ireo fiara fitateram-bahoaka any amin’iny lalam-pirenena iny indray izany.